Kooxda Liverpool Oo Dalab Rasmi Ah Oo Dhan 25 Milyan Oo Euro Ka Gudbisay Alex Oxlade-Chamberlain | Hangool News
Kooxda Liverpool Oo Dalab Rasmi Ah Oo Dhan 25 Milyan Oo Euro Ka Gudbisay Alex Oxlade-Chamberlain
June 27, 2017 - Written by Hangool
Kooxda Liverpool ayaa ugu dambayn dalab Rasmi ah ka gudbisay mid ka mid ah xiddigaha uu taageeraha weyn u yahay tababaraha kooxda ee Jurgen Klopp kadib markii ay Kooxda Arsenal miiska u saareen dalab dhan 25 Milyan oo ay kaga doonayaan xiddiga garabka uga ciyaara ee Alex Oxlade-Chamberlain.
Wargayska Mirror ayaa sheegaysa In Ay Liverpool si Rasmi ah dalab ugu gudbisay kooxda Arsenal si ay u heshos saxiixa xiddiga diidan in uu heshiiska cusub u saxiixo kooxda Gunners ee Alex Oxlade-Chamberlain.
Kooxda ka dhisan Gobolka Merseyside ayaa ka faa,iidaysanaysa kadib markii ay istaageen wadahadaladii heshiis kordhinta ahaa ee ay Arsenal kula jirtay xiddigan reer England.
23 jiran ayaa ka mid ah xiddigaha kooxda Arsenal ka tirsan ee galay sanadkoodii ugu dambeeyay ee heshiiska ay kula jireen kooxda xilli uu wali ka meer-meerayo heshiis cusub.
Xiddigan ayaa lagu soo waramayaa in ay sababta ugu weyn ee uu heshiiska cusub u diidayaa tahay in aanu xiddigan si toos ah ugu ciyaarin kooxda maadama uu xilli ciyaareedkii hore kooxda u ciyaaray 6 kulan oo uu ku soo bilowday iyo 13 kulan oo kale oo uu kursiga kaydka ka soo kacay tartamada oo dhan.
Waxana uu xiddigan si baas u doonayaa in uu la shaqeeyo tababaraha xamaasada badan ee hogaamiya kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp oo taageero weyn u ah xiddigan.
Reds oo horay ula soo wareegtay Mohamed salah Ayaan halkaas ku joojin doonin kharash garaynta lacagaha maadama uu Klopp doonayo in uu dhiso koox u tartanta koobabka xilli ciyaareedka dambe.